फ्रान्स - विकिपीडिया
झण्डा National Emblem (unofficial)
उल्लेखित नक्सा Metropolitan France (dark green)
– युरोपियन युनियन मा (green) — [Legend]
- राष्ट्रपति फ्रान्स्वा हलन्ड (UMP)
- प्रधानमन्त्री म्यानुएल वाल्स (UMP)
- माथिल्लो सदन सिनेट
- जम्मा ६७४,८४३ किमी² (41st)
- IGN ५५१,६९५ km2 (47th)
२१३,०१० sq mi
- Cadastre ५४३,९६५ km2 (47th)
२१०,०२६ sq mi
- जम्मा 65,821,885 (20th)
- जनघनत्व 116/किमी² (89th)
जिडिपी (पीपीपी) 2010 अनुमान
- जम्मा $2.145 trillion
- प्रतिव्यक्ति आय $34,077
जिडिपी (नाम मात्र) 2010 अनुमान
- जम्मा $2.582 trillion
- प्रतिव्यक्ति आय $41,018
गिनी (2008) 32.7
मानव विकास सूचकांक (2010) ▲ 0.872 (very high) (14th)
- ग्रिष्ममा (डिएसटि) CEST (युटिसी+2)
४.१ २००७को फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको चुनाव
९ बाहिरी लिंकहरू
११ सन्दर्भ सामाग्रीहरू
हल्लो! दु एर् एइत् स्भिन
फ्रान्स युरोपियन संगठनको सदस्य हो र यस संगठनको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो। फ्रान्स आफ्ना धेरै पुराना स्मारकहरू र एतिहासिक ठाँउहरूका कारणले धेरै प्रशिद्ध छ। जस्तै लुभ्र संग्राहालय, आइफल टावर, विजयको गुम्वज, झिभेर्नी, भेर्साइको दरबार र नोत्र दाम।
फ्रान्सलाई 'क्षेत्र' र 'विभाग'मा राजनैतिक विभाजन गरिएको छ।
फ्रान्समा दक्षिणपन्थी दल तथा समाजवादी दल प्रमुख राजनैतिक दल हुन्।
२००७को फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको चुनाव[सम्पादन गर्ने]
मुख्य पृष्ठ:२००७को फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको चुनाव
फ्रान्समा मे ६मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार निकोला सार्कोजी विजयी भए। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनले ५३ प्रतिशत मत हासिल गरे। यसैगरी उनका प्रतिद्वन्दी समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार सेगोलेन रोयलले ४७ प्रतिशत मत हासिल गर्न सफल भइन। सेगोलेन रोयलको फ्रान्सको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने सपना मे ६को निर्वाचन संगै अन्त भएको छ। मे ६ आइतबार भएको निर्वाचनमा फ्रान्समा लगभग ८५ प्रतिशत मत खसेको थियो। यो निर्वाचनमा चार करोड ४५ लाख जनताले मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यसलाई फ्रान्सको इतिहासमै अत्यन्त उत्साहजनक मानिएको छ।
फ्रान्सको मुख्य धर्म रोमन क्याथोलिक भएता पनि फ्रान्स आधिकारिक रूपमा धर्म निरपेक्ष छ। यहा कुनैपनि शैक्षिक संस्थाहरूमा धार्मिक सद्भभाव झल्किने चिन्हरू लगाउन पाइंदैन।
फ्रान्सको सबैभन्दा प्रशिद्ध खेल फुटबल हो। यहा निकै धेरै आन्तरिक फूटवल क्लवहरू रहेका छन्। यस्ता क्लवहरू बच्चाहरूका निम्ति समेत बनाइएका छन्। साना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयहरूमा फूटवल सिकाउने उदेश्यले हप्ताको कम्तीमा एक दिन फूटवल खेलको अभ्यास गराउन विद्यालयहरूमा साना इकाइका क्लवहरू समेत सक्रिय रहेका हुन्छन्। त्यसो त यहाँ अन्य खेलहरूपनि प्रख्यात छन्। तर दुखको कुरा फ्रान्समा क्रिकेट खेल भने खेलिन्न।
फ्रान्सको इतिहास निकै लामो छ। राजधानी पेरिस सहर एतिहासिक दृष्टिकोणले निकै सम्पन्न शहर हो। यो सहरमा ऐतिहासिक महत्वका दृष्टिले निकै भव्य र महत्वपूर्ण स्मारकहरू रहेका छन्। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा समेत बचेका यी ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै कसर बाकी राखेको छैन। शहरको बनावटमा पुरानै शैली झल्काउन सरकारले पेरिस लगायत मुख्य शहरहरूमा नया बनावटका घरहरू निर्माण गर्न दिएको छैन।
गत २५ बर्षदेखि फ्रान्स सरकारको बजेट घाटामा चलिरहेको छ। तरपनि यो संसारको आठौं धनि मुलुक मध्ये एक हो। यहाँ भित्र भित्रै निकै ठूलो गरिवी बढेर गएको छ। यहां कम्तीमा हप्ताको ३५ घन्टा काम गर्नुपर्छ। यति काम गरेवापत सरकारले न्यूनतम आम्दानी लगभग एक हजार यूरो हुने बताएको छ। तर यो पैसा यहांको महगो जीवनशैली धान्न अपर्याप्त रहेको छ।
अजरबैजान१ • अल्बानिया • अष्ट्रीया • आइसल्याण्ड • आयरल्याण्ड • इटाली • इस्टोनिया • एण्डोरा • क्रोएसिया • ग्रीस • चेक गणतन्त्र • जर्जिया१ • जर्मनी • टर्की१ • डेनमार्क • नर्वे • नेदरल्याण्ड्स • पोर्चुगल • पोल्याण्ड • फिनल्याण्ड • फ्रान्स • बुल्गेरिया • बेलारुस • बेल्जियम • बोस्निया र हर्जगोविना • भ्याटिकन सिटी • माल्टा • मोनाको • मोन्टेनेग्रो • मोल्दोवा • म्यासेडोनिया • युक्रेन • रुस१ • रोमानिया • लक्जेम्बर्ग • लात्भिया • लिथुआनिया • लिश्टेनस्टाईन • संयुक्त अधिराज्य • सर्बिया • साइप्रस२ • सान मारिनो • स्पेन • स्लोभाकिया • स्लोभेनिया • स्वीट्जरल्याण्ड • स्वीडेन • हंगेरी
अक्रोटिरि एवं देकेलिय2 • Faroe Islands • Gibraltar • Guernsey • जन मयेन • जर्सी • Isle of Man • स्भालबार्द
विकिमिडिया कमन्समा अरु धेरै सामग्रीहरू छन्: फ्रान्स
जर्मनी भाषा: Französische Republik;
↑ (फ्रेन्च) Ministère de la culture et de la communication – Délégation générale à la langue française et aux langues de France, "DGLF – Langues régionales et " trans-régionales " de France"
↑ (फ्रेन्च) French National Geographic Institute data.
↑ (फ्रेन्च) INSEE, Government of France, "Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2011, France métropolitaine"
↑ ९.० ९.१ ९.२ ९.३ "France"
↑ उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named France
↑ "Human Development Report 2010" (PDF), 2010
विकिमिडिया कमन्समा अरु धेरै सामग्रीहरू छन्: France
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=फ्रान्स&oldid=480245" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०३:४३, १२ जुलाई २०१५ मा परिवर्तन गरिएको थियो।
पाठ क्रिएटिव कमन्स ऐट्रिब्युसन/शेयर-अलाइक लाइसेन्सअन्तर्गत उपलब्ध छ; अतिरिक्त शर्तहरू लागू हुन सक्छ। अधिक जानकारीको लागि उपयोगको शर्तहरू हेर्नुहोला।